Heshiisyada wadajirka ah: waa maxay mushaarka shaqaalaha fasaxa umusha?
Su'aashu waxay markaa soo baxeysaa xubinta mushaarka waa in lagu hayaa muddadan, iyo gaar ahaan gunnooyinka iyo abaal-marinnada kale.
Sidaa darteed, lacagta caymiska waa inay:
inay ku xirnaadaan kaqeybgal firfircoon oo wax ku ool ah ee shaqaalaha howlaha qaarkood; in laga jawaabo…
Heshiisyada wadajirka ah: miyay tahay inaad ku siiso gunno isbeddel shaqaalaha ku jira fasaxa umusha? July 10th, 2021Tranquillus
READ Ku noqo shaqada fasax dheer oo xanuun ah ka dib
horeU adeegso zooms PowerPoint 2019
socdaTallaabooyinka bulshada: taas oo aakhirkii aan dhammaanayn Diseembar 31, 2020!